11 Archives - Tameelay
(၁၁-၇-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
July 11, 2020 by daddy
COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း(၁၁-၇-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ ၁။ (၁၁-၇-၂၀၂၀) ရက်နေ့အတွက် COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရာတွင် – အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) (NHL) မှ (ပထမအသုတ်) ဓာတ်ခွဲ နမူနာ (၄၆၇)ခု၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန (DMR)မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၀၄) ခု၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (မန္တလေး) (PHL, Mandalay) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၈၂) ခုနှင့် ရန်ကုန်မြို့၊ အမှတ် (၁) တပ်မတော်ဆေးရုံကြီး ခုတင် (၁,၀၀၀) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၇၅) ခု၊စုစုပေါင်း (၁,၀၂၈)ခု အား ယနေ့၊ ညနေတွင် စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့ရာ – COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာသစ် (၄) … Read more
Categories Uncategorized Tags 11
အဆင်ပြေ အောင်မြင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျရှုံးလဲကျတာပဲဖြစ်ဖြစ် ခဏလေးပါ
အားလုံးဟာ ကွယ်ပျောက်မှုဆီကိုဦးတည်ပြီးတော့ သွားနေကြတယ် ။ အဆင်ပြေ အောင်မြင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျရှုံးလဲကျတာပဲဖြစ်ဖြစ် ခဏလေးပါ ။ နောက်ဆုံးတော့လည်းလက်မြှောက်သွားကြရတာချည်းပါပဲ ။ မသိမှုမောဟတွေနဲ့အချိန်ကုန်သွားရင်သံသရာရေလျင်ကြောကြီးမှာမျှောပြန်အုံးမယ်ဆိုတာသေချာတယ် ။ ဘဝဆိုတာရိုးရိုးလေးဘာသာပြန်ကြည့်လိုက်ရင်အိုနာသေက ငြင်းမရတဲ့အဖြေပါ ။ မိမိတို့ရဲ့ဘဝဟာအနီးကပ်ကြည့်ရင် ပူဆွေးစရာအဝေးကကြည့်ပြန်တော့ ဟာသပါပဲ ။ အနှစ်သာရမရှိ ဘဝခန္ဓာတွေမှာအစစ်သာရဖြစ်တဲ့ တရားဘာဝနာကိုမှန်စွာအားထုတ်မှ အမြတ်ကျန်မယ်နော် ။ (သာရ ဂ ဝေ သီ) ဦးကိတ္တိသာရ (ကျော်ဟိန်း)ဦးဇင်းကြီး မြင့်မြတ်သောဘုံဘဝသို့ ရောက်ပါစေ။ 11.7.2020 အားလုံးဟာ ကြယ္ေပ်ာက္မႈဆီကိုဦးတည္ၿပီးေတာ့ သြားေနၾကတယ္ ။ အဆင္ေျပ ေအာင္ျမင္တာပဲျဖစ္ျဖစ္က်ရႈံးလဲက်တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ခဏေလးပါ ။ ေနာက္ဆုံးေတာ့လည္းလက္ေျမႇာက္သြားၾကရတာခ်ည္းပါပဲ ။ မသိမႈေမာဟေတြနဲ႔အခ်ိန္ကုန္သြားရင္သံသရာေရလ်င္ေၾကာႀကီးမွာေမွ်ာျပန္အုံးမယ္ဆိုတာေသခ်ာတယ္ ။ ဘဝဆိုတာ႐ိုး႐ိုးေလးဘာသာျပန္ၾကည့္လိုက္ရင္အိုနာေသက ျငင္းမရတဲ့အေျဖပါ ။ မိမိတို႔ရဲ႕ဘဝဟာအနီးကပ္ၾကည့္ရင္ ပူေဆြးစရာအေဝးကၾကည့္ျပန္ေတာ့ ဟာသပါပဲ ။ အႏွစ္သာရမရွိ ဘဝခႏၶာေတြမွာအစစ္သာရျဖစ္တဲ့ တရားဘာဝနာကို​မွန္စြာအားထုတ္မွ … Read more
Categories General Knowledge Tags 11
ဝေးပါစေလို့ ဆုမတောင်းခဲ့ပေမယ့် ရေစက်ကုန်တော့လဲ ဝေးသွားကြတာပဲ…
ဝေးပါစေလို့ ဆုမတောင်းခဲ့ပေမယ့် ရေစက်ကုန်တော့လဲ ဝေးသွားကြတာပဲ… ဆုံပါစေလို့ ဆုမတောင်းခဲ့ပေမယ့်လဲရေစက်ရှိတော့လဲ ဆုံလာကြတာပဲလေ…. ဒါဆို လွမ်းစရာကို နာစရာနဲ့လဲ ဖြေစရာမလိုပါဘူးဥပေက္ခာနဲ့သာ နေရာယူပါ… အဆင်ပြေနေတုန်းတော့ အချစ်ဆုံးလို့ ပြောကြတာပဲ အလိုဆန္ဒတွေ မပြည့်ဝတော့မှ အမုန်းဆုံးဖြစ်သွားတတ်ကြတယ် ဒါကိုပဲ သင်ခန်းစာယူပါ အရမ်းလဲ ချစ်မပြနဲ့ အရမ်းလဲ မလွမ်းပြနဲ့ အချစ်ကြီးလို့ ရှုံးတာ မဟုတ်ဘူး ရိုးသားခြင်းကို ဟန်မဆောင်တတ်လို့ရှုံးတာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ ရှေ့ဆက်ပါ လမ်းခွဲခြင်းမှာ ဝမ်းနည်းမနေပါနဲ့ ပန်းတိုင်းက ရနံ့မရှိပေမယ့်ပန်းတိုင်းက တန်ဖိုးရှိပါတယ် တန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိရှိ တန်ဖိုးမဲ့တဲ့သူက တန်ဖိုးမထားတတ်ဘူးဆိုတာကိုလဲ နားလည်ပါ တန်ဖိုး နားလည်ပြီး တန်ဖိုးထားတတ်သူနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်ကြ၍ ဘဝတွေလဲ အေးချမ်းပါစေနှလုံးသားတွေလဲ လှပနိုင်ကြပါစေ သုအလင်္ကာ(ရွှေသင်း) ေဝးပါေစလို႔ ဆုမေတာင္းခဲ့ေပမယ့္ ေရစက္ကုန္ေတာ့လဲ ေဝးသြားၾကတာပဲ… ဆုံပါေစလုိ႔ ဆုမေတာင္းခဲ့ေပမယ့္လဲေရစက္႐ွိေတာ့လဲ ဆုံလာၾကတာပဲေလ…. … Read more
Categories Tameelay Knowledge Tags 11
လှပတဲ့ မိန်းကလေး ဆိုတာ
လှပတဲ့ မိန်းကလေး ဆိုတာ မိတ်ကပ်ထက် စိတ်ဓါတ် ကို အမြဲပြင်ဆင် သုံးသပ်နေထိုင်တတ်သောမိန်းကလေးမျိုး••• အဆင့်အတန်းမခွဲတတ်ပဲတစ်ဖက်လူကိုလေးစားတတ်တဲ့မိန်းးကလေးမျိုး ယဉ်ကျေးလိမ္မာပြီးဘာသာတရားကိုအလေးထားတတ်တဲ့မိန်းကလေးမျိုး သေသပ်လှပစွာနေထိုင် တတ်သလိုအိမ်မှု့ ကိစ္စများကို နိုင်နင်းလုပ်ဆောင်တတ်သောမိန်းကလေး မျိုး လမ်းသွားရင်တခြားယောင်္ကျားတွေနဲ့မျက်စိမကစားတတ်တဲ့မိန်းကလေးမျိုး ယောင်္ကျားလေးတွေနဲ့ပြောဆိုတာက အစတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ပြောတတ်နေတတ်ဆက်ဆံတတ်တဲ့မိန်းကလေးမျိုး သစ္စာရှိပြီး ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာ ကိုစောင့်ထိန်းနိုင်စွမ်းရှိတဲ့မိန်းကလေးမျိုး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ဟန်မဆောင်တတ်ပေမဲ့အနေအထိုင်မရိုင်းတဲ့မိန်းကလေး မျိုး ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့တစ်ဖက်လူစိတ်ကိုအေးချမ်းစေနိုင်တဲ့မိန်းကလေးမျိုး ပညာတန်ဖိုးနားလည်ပြီးသတ္တိရှိတဲ့မိန်းကလေးမျိုး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့တည်တည်ကြည်ကြည်ပြောဆို ပြုမူနေတတ်တဲ့မိန်းကလေးမျိုး မနာလိုဝန်တို ခြင်းနဲ ပါး သလိုသူငယ်ချင်းအချင်းချင်းပေါ်နောက်ကျောဓါး ထိုးတတ်စိတ်မရှိ ပဲအပေါင်းအသင်းပေါ် စာနာ နားလည်ပေးတတ်တဲ့ မိန်းကလေးမျိုး ခောတ်မှီအောင်ဝတ်ပေမယ့်မရိုင်းပဲစမတ်ကျကျ•နေတတ်တဲ့မိန်းကလေးမျိုး မာနရှိပြီးမမောက်မာတတ်တဲ့မိန်းကလေးမျိုး သနားတတ်ပြီးအလှုအတန်းလဲဝါသနာပါတဲ့မိန်းကလေးမျိုး တန်ဖိုးထားရတာနဲ့တန်အောင်တန်ဖိုးရှိတဲ့မိန်းကလေးမျိုးတွေရှားတယ်ဆိုပေမယ့် ယနေ့ခေတ်မှာ ရှိပါသေးတယ်ဆိုတာ သိစေချင်ပါတယ် လေးစားလျက်..Dar Li လွပတဲ့ မိန္းကေလး ဆိုတာ မိတ္ကပ္ထက္ စိတ္ဓါတ္ ကို အၿမဲျပင္ဆင္ သုံးသပ္ေနထိုင္တတ္ေသာမိန္းကေလးမ်ိဳး••• အဆင့္အတန္းမခြဲတတ္ပဲတစ္ဖက္လူကိုေလးစားတတ္တဲ့မိန္းးကေလးမ်ိဳး ယဥ္ေက်းလိမၼာၿပီးဘာသာတရားကိုအေလးထားတတ္တဲ့မိန္းကေလးမ်ိဳး … Read more
ဇွဲကပင်ကြီးကို အားနာပါ၊ ကယ်ဆယ်ရေသမားတွေကို အားနာပါ၊ မိဘတွေကို ငဲ့ညှာပါ
ဇွဲကပင်ကြီးကို အားနာပါ၊ ကယ်ဆယ်ရေသမားတွေကို အားနာပါ၊ မိဘတွေကို ငဲ့ညှာပါ ဇွဲကပင်တောင်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ကရင်ပြည်နယ်တွင် တည်ရှိသော တောင်ဖြစ်သည်။ ကရင်ပြည်နယ်၏ အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်ပြီး ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၂၃၇၂ ပေမြင့်ပြီး ဘားအံမြို့၏ တောင်ဘက် ၇ မိုင်ခန့်အကွာ ခလောက်နို့ကျေးရွာအနီးတွင် တည်ရှိပါသည်။ ဇွဲကပင်တောင်သို့ တက်ရန်နှင့် ဆင်းရန်အတွက် နေရာ (၂) ခု ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ တစ်ခုမှာ ခလောက်နို့ ကျေးရွာဝင်ပေါက်ဖြစ်ပြီး ဘားအံမြို့မှ နေ၍ (၁၅) မိနစ်ခန့် ဆိုင်ကယ် (သို့) ကားဖြင့် သွားရောက်နိုင်ပါသည်။ နောက်တစ်ခုမှာ လုံမဏ္ဏီဥယျာဉ်ဝင်ပေါက်ဖြစ်ပြီး သံလွင်တံတားနှင့် နီးသောကြောင့် ခရီးသွားများ အများဆုံးတက်ရောက်သော ဝင်ပေါက်ဖြစ်သည်။ အင်မတန်လှပတဲ့ရှူခင်းများနဲ့ မတ်စောက်မြင့်မားလွန်းပါတယ်။ အဲဒါကိုကပင် ဇွဲကပင်တောင်ရဲ့ ထူးချက်ချက်တစ်ခုပြီး ခရီးသွားတေရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တက်ရတာအင်မတန် … Read more
ဦးကိတ္တိသာရ၊ (အကယ်ဒမီကျော်ဟိန်း) သက်တော် (၇၃) နှစ် ပျံလွန်တော်မူ
ဦးကိတ္တိသာရ၊(အကယ်ဒမီကျော်ဟိန်း) သက်တော် (၇၃) နှစ် ပျံလွန်တော်မူ ဩစတေးလျ၊ ကင်မ်ဘာရာယနေ့ဇူလိုင် ၁၁ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် မနက် ၉ နာရီ ၂၇ မိနစ်၌ ဩစတေးလျနိုင်ငံ၊ကင်မ်ဘာရာမြို့တွင်သီတင်းသုံးလျက်ရှိသော ဦးကိတ္တိသာရ(သရုပ်ဆောင်အကယ်ဒမီကျော်ဟိန်း)သည်ပျံလွန်တော်မူသွားပြီဖြစ်ပါသည်။ နောက် ၃ ရက်မြေက်ဖြစ်သည့် ဇူလိုင် ၁၄ သည် ဆရာတော် ၏ ၇၃ နှစ်မြောက်မွေးနေ့ဖြစ်သည်။ ဦးကိတၱိသာရ၊ (အကယ္ဒမီေက်ာ္ဟိန္း) သက္ေတာ္ (၇၃) ႏွစ္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူ ဩစေတးလ်၊ ကင္မ္ဘာရာယေန႔ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ မနက္ ၉ နာရီ ၂၇ မိနစ္၌ ဩစေတးလ်ႏိုင္ငံ၊ကင္မ္ဘာရာၿမိဳ႕တြင္သီတင္းသုံးလ်က္ရွိေသာ ဦးကိတၱိသာရ(သ႐ုပ္ေဆာင္အကယ္ဒမီေက်ာ္ဟိန္း)သည္ပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားၿပီျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ ၃ ရက္ေျမက္ျဖစ္သည့္ ဇူလိုင္ ၁၄ သည္ ဆရာေတာ္ ၏ ၇၃ ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔ျဖစ္သည္။